Poertô Rikô: Nitolo-batana Ilay Mpikatroka Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2017 19:17 GMT
Nitolo-batana tany amin'ny polisy ilay Pôrtô Rikàna mpikatroka tontolo iainana “Tito Kayak” tamin'ny 14 Novambra rehefa nandositra tamin'ny fomba mahavariana hita tamin'ny fahitalavitra, taorian'ny hetsi-panoherana naharitra herinandro teny an-tampon'ny fiaramilina fananganana tranobe mirefy 60 metatra tao San Juan. Nanohitra ny fanamboarana tranobe nampiadihevitra izy izay efa nampitandreman'ny mpiaro ny tontolo iainana fa hiteraka fahavoazana goavana eny amin'ny tora-pasiky ny vahoaka ny fananganana izany.
Manana tantara lavabe momba ny fianihana toerana avo be i Tito Kayak (ny tena anarany dia Alberto de Jesus). Tany Etazonia tamin'ny taona 2000, niakatra tao amin'ny Tsangambaton'ny Fahafahana izy ary nanantona sainam-pirenena Pôrtô Rikàna teo amin'ny satro-boninahiny. Tamin'ny taona 2005, niezaka nanakalo ny sainan'ny Firenena Mikambana teo anoloan'ny tranoben'ny Firenena Mikambana tamin'ny sainam-pirenena Pôrtô Rikàna izy. Roa taona taty aoriana, nanantona sainam-pirenena Palestiniana avy amin'ny tilikambo Israeliana tao Morondrano Andrefana koa izy.
Dika avy amin'ny IndymediaPR.org ny sary
Bilaogera Dominikàna Catarsis Diaria [es] nanoratra hoe:
Ary inona no tena mahaliana momba ity fihetsiketsehana ity? Ny fandosirany – nandositra ny polisy, izay nanana baiko isamborana azy, miaraka amin'ny tady sy kayak – ary avy eo nandositra tamin'ny alalan'ny filomanosana tao amin'ny farihy Condado ao San Juan. Tena “Hollywood” nahavariana izany, ka nanokana vaovao manokana momba azy ny namako tao amin'ny bilaogy hatsikana Poertô Rikàna “El Ñame”, nanambara fa nanome azy ny toerana Bruce Willis manaraka izy ireo.
Nandefa lahatsary misy ny fandosiran'i Tito Kayak ny Indymedia Puerto Rico, ary iray hafa (eto ambany) narakitra fotoana fohy talohan'izy nitolo-batana. Mandrisika ny Porto Rikana izy mba hiray hina, hanao tsy fankatoavana sivily, sy manao izay rehetra azony atao mba hanakanana sy hanemotra ny fanorenana tranobe sy hotely lafo vidy ao amin'ny morontsiraky ny nosy.
Maro ireo bilaogera nandefa ny rohin'ny lahatsary, anisan'izany i Fulano X [es] izay nilaza hoe: “Fanomezam-boninahitra kely ho an'ny fihetsik'i Tito Kayak, ankafizin'ireo sasany diso fandray avy amin'ny olon-kafa ity, izay noho ny fihetsiny niteraka hetsika ilaina hitarihana fifanakalozan-kevitra momba ny zava-doza eto amin'ity firenena ity. “
Rue Morn tao amin'ny Latrina.net [es] nilaza hoe:
Tsy azo hatsangana hahatonga faharavana ho an'ny harenantsika voajanahary sy fanitsakitsahana ny lalàna misy ny fampandrosoana eto Portô Rikana… tsy afaka mitsiky foana isika noho ireo rehetra manome dolara ary milaza fa hamorona asa. Te ho tompon'ny zavatra izay antsika rehetra ara-drariny izy ireo. Poerto Riko iray manontolo dia tokony hahazo tombontsoa amin'ireo loharanon-karenany voajanahary sy manan-tantara, fa tsy ireo izay manana fahafahana hampatavy voalavo sy milaza ny tenany fa mpitondra antsika ihany.